UMongameli weHodges University, uDkt. John Meyer, Uyakwamukela!
Funda ukuthi Kungani iHodges University Iyunivesithi Ehlukanisayo eSouthwest Florida
Hlangana noDkt. Meyer noHodges University
Njengokungeyona i-alumnus kuphela yeHodges University kodwa futhi nomongameli wayo, ngizizwa ngifaneleke ngokukhethekile ukwamukela kulesi sikhungo esihle. Siyisikhungo esivunyelwe esifundeni, esizimele, esingenzi nzuzo, esasungulwa ngo-1990 futhi sikhonza ngokuziqhenya eSouthwest Florida kusukela lapho. Inyuvesi yethu inwebile ukuhlangabezana nezidingo zomphakathi wethu - umhlaba osizungezile - onamakhampasi kuzo zombili iFort Myers naseNaples, eFlorida, kanye nokufinyelela ezemfundo kubandakanya hhayi kuphela imfundo yendabuko esekhempasini kepha nezifundo nezinhlelo eziku-inthanethi.
Umsebenzi wethu ukulungiselela abafundi ukuthi basebenzise imfundo ephakeme emisebenzini yabo yomuntu siqu, yobungcweti neyomphakathi.
Imvelo Engaqhathaniseki yaseHodges University
IHodges University inikeza imvelo yokufunda ngokungafani nanoma yisiphi esinye isikhungo esifundeni ngokunikela:
isitifiketi, abangane, izinhlelo ze-bachelor's kanye ne-master degree;
amashejuli aguqukayo osuku, okuhlwa, ahlanganisiwe, kanye namakilasi aku-inthanethi;
izifundo ezifundiswa ngoprofesa abangabasebenza njengamanje noma abake basebenza emikhakheni yabo; futhi
izinhlelo ezenzelwe ukusiza abafundi ukuthi bakusebenzise lokho abakufunde emsebenzini.
Ngaphezu kwalokho, izinhlelo zethu eziningi zisiza abafundi bethu ukuthi bathole izifakazelo zobungcweti ezindaweni ezinjengobuhlengikazi, ukubalwa kwezimali zomphakathi kanye nokwelulekwa ngempilo yengqondo. Ezinye ziholela ekuqinisekisweni kwemboni. Omakadebona bezempi, amalungu omsebenzi osebenzayo, kanye nemindeni yabo bangathola usizo ngezinjongo zabo zemfundo ngeDkt Peter Thomas Veterans Services Centre yethu.
IHodges University iphinde inikeze isiNgisi esivelele nesiphelele njengohlelo loLimi Lwesibili (ESL) olunikeza ukucwiliswa kolimi lwesiNgisi kuzikhulumi ezingezona ezomdabu zesiNgisi ezifuna ukukhulisa ukushelela kwazo. Ngaphezu kwamazwe ahlukene angama-25 amelwe ngokujwayelekile phakathi kwabafundi bethu be-ESL.
Ukubandakanyeka kukaHodges University Njengesisetshenziswa Somphakathi
Ekugcineni, siyimpahla ebalulekile esifundeni saseNingizimu-ntshonalanga yeFlorida, esiphendula njengendawo yokufinyelela emfundweni ephakeme yabafundi nanjengabalingani ekuthuthukisweni okubanzi kwezomnotho nezenhlalo. Siyaziqhenya ngeqhaza lethu kulo mphakathi omuhle kangaka, futhi sibheka umthwalo obalulekile njengomphumela obaluleke kakhulu. Ngokuhambisana nokuzibophezela kwethu okuqhubekayo ekusizeni ukuhlinzeka abasebenzi abanamakhono nabaqeqesheke kahle kubasebenzi bendawo abakhulayo, ngokuqhubekayo sifuna ukuthola ezinye izindlela isikhungo sethu esingasebenzela ngazo iSouthwest Florida.
Ngikumema ukuthi uhlole konke iHodges University okufanele ikunikeze futhi uzitholele ngokwakho lokho okusenza sihluke kwezinye izikhungo zemfundo ephakeme. Ngikholwa ukuthi uzohlatshwa umxhwele yilokho le nyuvesi ekudingayo.
UJohn D. Meyer, i-DBA
I-Hodges University's Mission, Vision, kanye nezinsika
IHodges University — isikhungo esizimele esingenzi nzuzo — ilungiselela abafundi ukuthi basebenzise imfundo ephakeme emisebenzini yabo yomuntu siqu, yobungcweti neyomphakathi.
IHodges University izokwaziwa ngokugqama emfundweni ebandakanya wonke umuntu emisebenzini nasekubandakanyeni umphakathi.
Qhubeka uthuthukise iphothifoliyo yomkhiqizo kaHodges ukuhlangabezana nezidingo zomphakathi nezomqashi.
Ngezinhlelo zezifundo, khulisa amathuba okubhaliswa kwabafundi, ukugcinwa, ukuthweswa iziqu, nomsebenzi.
Kuzinhlelo ezingezona ezemfundo, phakela izidingo zomphakathi kanye nezintshisekelo zabahlanganyeli.
Thuthukisa izinhlelo ezintsha zezidingo ezingakahlangani, ezisakhulayo nezesikhathi esizayo emiphakathini yethu, ukuze kusizakale abaqashi besifunda nabafundi bethu.
Faka izinhlelo ze-hiatus noma zomhlalaphansi ezingasahlangabezani nezinhloso zababambiqhaza bezikhungo nezomphakathi.
Ukuheha nokugcina abasebenzi abaqeqeshiwe abahlukahlukene futhi wandise umthelela omuhle wabasebenzi ngabodwana.
Qalisa ukuthuthukiswa kwenqubo okwandisa ukusebenza kahle futhi okuthuthukisa ikhwalithi yensizakalo kubafundi nakwabanye ababambiqhaza.
Imizamo yokugxila empilweni yezimali yesikhungo.
Yabelana ngempumelelo ngokwengeziwe ngendaba yaseHodges University nabafundi, ubuhlakani kanye nabasebenzi, abafundi base-alumni, abangani beNyuvesi, kanye nemiphakathi yethu, futhi sisebenzise izinhlelo - imvamisa ngokusebenzisana nababambiqhaza - ezisiza imiphakathi yethu.
Thuthukisa izindlela ezintsha zokuxhumana zabafundi nomphakathi obanzi ukuze ulwazi lweHodges University lubanzi, lujule, futhi lufaneleke kakhulu.
Bona amathuba nemithwalo yemvelo ekhona eSouthwest Florida, esifundazweni saseFlorida, kanye nesifunda sethu.
Qinisa inethiwekhi kaHodges yabantu nezikhungo ukuze kwandiswe ithonya lesikhungo.
Vikela imithombo emisha engenayo yangaphandle (imifundaze, izibonelelo, ukwesekwa kwamaphrojekthi amakhulu) ukuxhasa isikhungo.
Yakha ikusasa ngokuhlela amasu nokusebenza ngempumelelo.
Isigaba se-2021 (Isikhathi siphela ngo-Okthoba 2021):
UGillian Cummings-Beck, uMqondisi Wokuphathwa Kobungozi, Taylor Taylor Morrison
UJerry F. Nichols, Iphini Likamongameli Ophakeme, Izinzuzo zikaBrown & Brown
Isigaba se-2022 (Isikhathi siphela ngo-Okthoba 2022):
UMichael Prioletti, Iphini Likamongameli Ophakeme, uRobert W. Baird & Co, Inc.
UGerard A. McHale, Jr., Umnikazi / uMongameli, uGerard A. McHale, Jr., PA
UTiffany Esposito, uMongameli kanye ne-CEO, i-SWFL, Inc.
Isigaba se-2023 (Isikhathi siphela ngo-Okthoba 2023):
ULeslie H. King III, uMxhumanisi Ophethe Abazimele
UMarisa Cleveland, u-Ed.D, uMqondisi oMkhulu, i-The Seymour Agency
UMarilyn Santiago, Partner / CMO Creative Architectural Resin Products, Inc.
UDianne Hamberg, Iphini Likamongameli & Umholi Wegatsha, i-BB & T manje eyiTruist
U-Erica Vogt, uNobhala noMgcinimafa